xog la ogaaday sababta Horn cable hawada looga waayey – Xeernews24
xog la ogaaday sababta Horn cable hawada looga waayey
20. Juni 2016 /in WARAR/NEWS /von admin
Telefishinka Afka Soomaaliga wax ku tabiya ee Horn Cable , ayaa maalintii sadaxaad ka maqan Satelite-ka Thaicom 5 , waxaana soo baxaya warar kala duwan oo ku aadan sababta Telefishinkaasi oo kamid ahaa kuwa loogu daawashada badan yahay uu hawada uga maqan yahay.
Inta badan Telefishinada Soomaalida ayaa kasoo gala Satelite-ka Thaicom 5 oo laga leeyahay dalka Thialand, waxaana Telefishinka Horn Cable uu yahay mid aan laga daawaneyn meelo badan oo caalamka katirsan.
Bulshada Soomaaliyeed ayaa si weyn u hadal heysa waxa ku dhacay Telefishinka Horn Cable iyo sababta looga saaray Satelite-ka , waxaana wararka soo baxaya sheegayaan in ay siyaasad ka dambeyso sababta looga saaray Satelite-ka .
Wararka la isla dhax marayo ayaa sheegaya in Telefishinka Horn Cable ay dacweesay Dowlada Itoobiya kadib markii uu telefishinkasai tabiyay warbixino la xariira xasuuq la sheegay in uu ka dhacay Deegaanka Jaamac Dubad ayna ka dambeeyeen Ciidamada Liyuu Booliis.
Dowlada Itoobiya ayaa la sheegay in ay dhibsatay Wararka la xariira xasuuqii ka dhacay Gaashaamo gaar ahaan Jaamac Dubad oo lagu laayay dad kasoo jeeda deegaanada maamulka Somaliland, waxaana xasuuqaasisi adag uga hadlay dad badan oo Soomaaliyeed.
Sida Wararka lagu helayo Dowlada Itoobiya ayaa u dacwootay Shirkad lagu magacaabo RR Media oo laga leeyahay Israel, waxa ayna shirkadan soo kireesatay Satelite-ka Thaicom 5, shirkadan ayaana ka saartay Telefishinka Horn Cable qeybta Satelite-ka.
Ilo ka tirsan Shaqaalaha Telefishinka Horn Cable ayaa laga soo xigtay in Dowlada Itoobiya ay ka codsatay shirkada laga leeyahay Isra’el in ay ka saaro Satelite-ka telefiduhinka Horn Cable, waxaana arintan sahashayxariirka wanaagsan ee ka dhaxeeya Itoobiya iyo Israel.
Shirkada RR Media ee laga leeyahay Israel ayaa waxay isku xirtaa qeybaha Satelite-ka Hotbird iyo Thaicom oo u kala baxa Asia iyo Africa, waxa ayna shirkadan ay awoodaa in ay hawada ka saarto Telefishinada Soomaalida ee kasoo gala Satelite-kan.
Telefishino ay Soomaali leedahay ayaa sidan oo kale Dowlada Itoobiya ay horay hawada uga saartay kadib markii laga sii daayay Barnaamijyo ay dhibsatay Dowladaasi, waxa ayna arintaasi cabsi ku beertay telefishinada ay Soomaalida leedahay.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png 0 0 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-06-20 18:46:252016-07-05 17:00:43xog la ogaaday sababta Horn cable hawada looga waayey
Reer salal,Sitti.iyo Djibouti waxay eedeen Cali Cumar iyo cabdi Qisadi Saamiya iyo Xaamud